Funda indlela yokudlala i-Chess: Inqanaba labaQalayo ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Funda indlela yokudlala chess: Inqanaba labaqalayo
Juni 20, 2019 0 IiCententarios 1523
Ngaba uyafuna ukufunda Uyidlala njani chess ngokukhawuleza nangokulula? Kwisithuba esilandelayo ndiza kukubonisa yonke into ofuna ukuyazi ukusuka ekuqaleni! I-Chess ngumdlalo onomdla kakhulu apho uvavanya zonke izakhono zakho zokuhlalutya kunye nokusebenzisa iindlela.
Okwangoku, ithathwa njengomdlalo kunye nemvelaphi yayo isusela kwiminyaka ye-15. Naxa kungumdlalo ofuna ugxininiso, uhlalutyo kunye namandla okucwangcisa, Akunzima! Kufuneka nje uyazi imigaqo esisiseko kunye nokuhamba, kwaye ukuziqhelanisa kuya kukunceda ukuphucula izakhono zakho.
Ngumdlalo owonwabisayo, apho amathuba emidlalo engenasiphelo, njengamathuba okuphumelela.
Okulandelayo, ndiza kukubonisa yonke into oyifunayo ukuqala ukudlala, qhubeka ufunda!
Uqala njani umdlalo we-chess
ukuba Yazi indlela yokudlala chess Kuya kufuneka uqale ngezinto ezisisiseko ezakha lo mdlalo umnandi. Kuyimfuneko ukuba uyazi ukuba yenziwa njani ibhodi, iziqwenga ezinayo, nendawo ekuyo. Yile nto kanye ndiza kukubonisa yona ngoku ...
Abadlali kunye nebhodi
Lo mdlalo iqhuba kunye nabadlali be2. Bajongane kunye nebhodi chess ebekwe phezu komphezulu.
Ibhodi inayo ubume besikwere kunye neebhokisi ze64. Sineebhokisi ezimnyama ze-32, zihlala zimnyama kunye neebhokisi ezikhanyayo ze-32, phantse zihlala zimhlophe. Ukusuka apho, ihlelo, amaqhezu amnyama namhlophe.
Los iibhokisi okanye iibhokisi zibekwe ngokwahlukeneyo, zenza imiqolo esi-8, enenombolo ukusuka kwi-1 ukuya kwi-8 ne-8 yeekholamu. Iikholamu zichongiwe ngoonobumba oonobumba a, b, c, d, e, f, g, h, ukusuka ekhohlo ukuya ekunene.
Umdlali ngamnye kufuneka ichongwe ngombala, oya kuthi wenze intshukumo yakho. Ibhodi kufuneka ibekwe kumgangatho othe tyaba, ngokungcono itafile, ukuze isikwere esifanelekileyo somdlali simhlophe.
Injongo yomdlalo shiya inkosi ngaphandle kokuzikhusela, sibanjisiwe kwaye ngaphandle kokuphuma. Kukho "umjonga." Ukubamba inkosi akuyiyo intshukumo esebenzayo, ke ngoko ayizonjongo zomdlalo. Kubalulekile ukuyicacisa kuba sisiphithiphithi rhoqo.
Ngexesha lomdlalo kukho amanqanaba e-3, abizwa ngokuba: ukuvula, umdlalo onesiqingatha kunye nowokugqibela. Okulandelayo, ndiza kuchaza nganye nganye:
Ukuvula Umdlalo uqala nge hambisa isiqwenga sokuqala okanye ipawn, ukusuka apho, iintshukumo ezilandelelanayo ezakha umdlalo. Yinxalenye yomdlalo oqhele ukuba nesakhiwo esimiselweyo. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuvula, umzekelo: Ukuvulwa kweSpanish, uKhuselo lweKing yaseIndiya kunye noKhuselo lwaseFrance.
Umdlalo ophakathi Eli nqanaba kulapho kwenziwa iintshukumo ezahlukeneyo kwaye Basebenzisa iindlela ezahlukeneyo. Lelinye lamacandelo abangela umdla kumdlalo we-chess.
Isiphelo Ekugqibeleni ibhodi sele inezicucu ezimbalwa. Kuyo, i "Umnxibelelanisi" ngokushiya inkosi ikrwitshiwe kwaye iboshwe.
I-Chess ungumnikazi weentlobo ze-6 zamacandelo Ukuphuhliswa komdlalo, oboniswe kumbala ngamnye, nokuba kukukhanya okanye kumnyama:
Kumkani: Isiqwenga se1
Ukumkanikazi okanye iNenekazi: Isiqwenga se1
Inqaba: Icandelo le-2
Bishop: Icandelo le-2
Ihashe: Icandelo le-2
Pawn: Icandelo le-8
Ubume beziqwenga ebhodini
Ukuqala umdlalo, jonga isikhundla sakho, ibhokisi engezantsi esezantsi kufuneka ibe mhlophe. Yindlela yokucwangciswa kweziqwenga zekheks ngolu hlobo lulandelayo:
Iinqaba Zibekwe kumqolo 1 kunye 8, kwiibhokisi a h. Oko kukuthi, kwiimbombo zomqolo wokuqala webhodi.
Amahashe Zibekwe kwiibhokisi zangaphambili, kungekudala ecaleni kweenqaba.
Oobhishophu. Zibekwe kwiibhokisi ze-cyf, ngokukhawuleza ecaleni kwamahashe.
Inenekazi okanye ukumkanikazi Ibekwe kwibhokisi yeziko ngombala ofanayo neziqwenga zomdlali. Ukuba ukumkanikazi umhlophe kwisikwere esinombala okhanyayo, kungenjalo, ubekwe kwisikwere esinombala omnyama.
Kumkani Imele ibekwe kwibhokisi elungiselelwe ecaleni kokumkanikazi.
Iipews. Babekwe kumqolo we-2 kunye ne-7 egubungela ibhokisi nganye.
Candelo ngalinye linalo indlela yokuhamba ebhodini, kwaye ndiya kuchaza nganye nganye:
Ipawn Eli lelona qhekeza lininzi, kodwa lona lelona lincinci linamandla kumdlalo we-chess. Isikwere esinye sihamba siye phambili ngexesha. Kuphela, ekuqaleni komdlalo unokuhambisa iibhokisi ezimbini ngaphambili. Ukuba isiqwenga ngaphambili, sithintela indinyana yakho kuba awukwazi ukutsiba amanye amalungu. I-pawn ibamba umchasi wayo ngokunyakaza kwe-diagonal. Isikwere esinye ngaxeshanye, sizibeka kwimeko yesiqwengana. Ukuba i-pawn ifikelela kwelinye icala lebhodi yesithsaba. Ke iba sisiqwenga osifunayo, ngaphandle kwenkosi okanye ipawn.
UBhishophu Esi siqwenga sinokuhamba ngomgca othe ngqo we-diagonal ebhodini, njengezikwere ezininzi ozithathela ingqalelo kwisicwangciso sakho. Awunakho ukutsiba ezinye iziqwenga. Ukubanjwa kuqhutywa ngendlela eqhubayo ngokuzibeka kwisikwere sesixhobo esichasayo. Ngendlela yokuhamba kwayo, ihlala ihlala kwiibhokisi zombala wayo wokuqala.
Inqaba Inqaba ihamba ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye ebhodini. Ukubanjwa kwenziwa ngendlela ahamba ngayo. Awunakho ukutsiba kwezinye iziqwenga. Iqwalaselwa njengenye yezona ziqendu ezinamandla kuba zinokubekwa nakweyiphi na ibhodi ebhodini. Ngokucacileyo ngokuhlonipha imidlalo. Kwaye sisiqwenga esisiseko sokuphosa.
Ihashe Iqwalaselwa eyona nto ikhethekileyo chess, kuba yeyona nto ilingene ngaphezulu kwezinye iziqwenga. Ukuhamba kwayo kunobume be "L", ke, ihlala iwela kwisikwere sombala ochaseneyo xa uqala. Kuyo "L" intshukumo, ayizukuthatha nayiphi na into eyidlulayo.
Ukumkanikazi Ikwabizwa ngokuba "yinenekazi" lelona candelo linamandla kwibhodi ye-chess. Ungahambisa naliphi na inani lebhokisi kumgca othe tye. Iintshukumo zazo zinokuhamba ngokuthe tye, zibambe nkqo okanye zidibane. Ukumkanikazi uzibamba ngendlela enye ahamba ngayo, efaka kwibhokisi yento ebisiweyo.
Inkosi Eli lelona candelo libalulekileyo lomdlalo we-chess, kodwa elibuthathaka ngenxa yokuhamba kwalo okuphantsi. Injongo kukuzikhusela. Ukuba inkosi ibekwe kwisikhundla ukuze ukubanjwa kwayo kungenakuphepheka, umdlalo uphelile. Umdlali owabekwa inkosi yakhe "yangumlingane". Ukuhamba kwabo kunokwenziwa ngokuthe tyaba, ngokuthe nkqo, nge-diagonal, isikwere esinye ngexesha. Ukumkani ubamba ngendlela enye ahamba ngayo, azibeka kwisikwere sedola elinyuselweyo. UKumkani kufuneka akuphephe ukuzibeka nakweyiphi na isikwere esimfaka "ngokujonga" phambi komchasi.
Iindlela: Qalisa ukudlala i-chess ngoku!
Okulandelayo, ndiza kukubonisa onke amacebo ekufuneka uyazi malunga ne-chess ukuze ube yimpumelelo.
Ukuqala komdlalo Umdlali ongumnikazi wokukhanya okanye amaqhekeza amhlophe uyaqala. Ngokubanzi, ukubakho kombala okutshiweyo kuyatsalwa.
Cazulula intshukumo nganye. Njengoko isiqwenga ngasinye sihamba ngokwahlukileyo. Kuya kufuneka uhlaziye intshukumo nganye kuba chess ayingomdlalo wethuba. Ntshukumo nganye ibeka ithuba kumdlalo womdlali kunye nokungalunganga komdlali ophikisayo.
Bamba isiqwenga. Umdlali ngamnye udlala ijika elinye ngexesha. Awunakho ukwenza intshukumo ephela kwisikwere esihlalwa sisiqwengana sakho. Kodwa, unokuhlasela isikwere esihlalwa sisiqwenga somdlali ophikisayo. Olu hlaselo lubizwa ngokuba kukubamba isiqwenga kwaye isiqwenga somdlali ochasayo siyakususwa.
Hambisa i-pawns. Iqala ngokushukumisa i-pawns, njengoko zingumtya wokuqala womlo. Kufuneka ugcine ulawulo lwembindi yebhodi. Ke ngoko, zama ukuhambisa ii-pawns eziphakathi kuqala kwaye ungahambi kwindawo esecaleni kwindawo yokuqala.
Ukuphosa. Emva koko yiya ukwenza intshukumo yezinye iziqwenga, ezinjengehashe, ubhishophu kunye nenqaba. Le ntshukumo yokuphosa iqulathe ukubeka inkosi yakho kwindawo ekhuselekileyo, kwaye zimbini iindlela zokwenza. Unokuphosa kube kanye kuphela kumdlalo. Kwaye unokukwenza kuphela ukuba ukumkani kunye nenqaba ende eza kuqokelelwa ayizange ibekho intshukumo ngaphambili.
Ukuphosa okufutshane Kuyenzeka, xa inkosi yakho ikwizikwere ezibini ezisa kwinqaba ekufutshane. Kwintshukumo elandelayo le nqanawa ishukuma izikwere ezibini ukuya kwicala lokumkani.
Ukuphosa ixesha elide Inentshukumo yokuhamba kweenkosi kwizikwere ezibini ukuya kweyona nqadi ikude. Kwintshukumo elandelayo le nqanawa ishukuma izikwere ezithathu ukuya kwicala lokumkani.
Ukukhusela isiqwenga ngasinye. Ngale ndlela uphuhlisa umdlalo ngokusebenzisa iintshukumo kunye nokuzikhusela kwento nganye.
I-Chess ngumdlalo omkhulu, oshiya ukufundisa kunye nokufunda okukhulu, ngaphandle kobunzima bayo. Phuhlisa ulwazi lwengqondo, isikhundla sokuhlaziya kunye nokugxila. Ingadlalwa ngabancinci nabadala. Olona khetho lubalaseleyo kwi ube nexesha elimnandi nosapho kunye nabahlobo.
Yiya phambili kwaye ukonwabele okufundileyo kule post malunga Uyidlala njani chess.
1 Uqala njani umdlalo we-chess
1.1 Abadlali kunye nebhodi
1.2 Injongo yomdlalo
1.3 Amanqanaba omdlalo
2 Chess iziqwenga
2.1 Ubume beziqwenga ebhodini
2.2 Ukuhamba kweziqwenga
3 Iindlela: Qalisa ukudlala i-chess ngoku!
Uyifumana njani i-akhawunti ye-Instagram
Funda ukuba ungadlala njani ithamsanqa ukusuka ekuqaleni